मिस वर्ल्ड बन्नै लाग्दा भारतमा शृंखलाको यस्तो चर्चा (फोटो सहित) «
मिस वर्ल्ड बन्नै लाग्दा भारतमा शृंखलाको यस्तो चर्चा (फोटो सहित)
प्रकाशित मिति : 29 November, 2018
एजेन्सी। मिस नेपाल वर्ल्ड शृंखला खतिवडाको चर्चा भारतमा पनि छाएको छ । तर उनको चर्चाको प्रशंग भने मिस वर्ल्ड नभएर अरुनै छ । बलिवुड अभिनेता शाहिद कपुरकी पत्नी मीरा राजपुतको एक डान्स भिडियो यतिबेला निकै भाइरल भइरहेको छ। यो भिडियोमा मीरा आफ्ना बुवा विक्रमादित्य राजपुतसँग डान्स गरिरहेकी छन्।
बुवा–छोरी ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर’ भन्ने गीतमा डान्स गरेका छन्। मीराका बुवाले आफ्नी पत्नी बेला (मीराकी आमा) सँग ‘तुम सा नही देखा’ बोलको गीतमा डान्स गरे र पछि छोरीसँग पनि डान्स गरे। भाइरल भिडियोमा ‘बुवा–छोरी’ को डान्स निकै रमाइलो देखिएको थियो।
यहि भिडियो हेरेर सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले मीराको डुब्लिकेट फेला पारेको भन्दै फोटो राखेका छन् । भारतीय संचारमाध्यमले पनि मिस नेपाल श्रृखंखा खतिवडालाई मीरासँग तुलना गरेका छन्। भारत कै ठुलो अनलाई दैनिक भाष्करले मीस नेपाल श्रृंखला खतिवडालाई मीराको डुब्लिकेट भएको जनाएको छ। हुनत शृंखलाको चर्चा अहिले विश्वभर रहेको छ । तर यो घटनाले कुना कुना सम्म पनि शृंखलाको तस्बिर परिचित रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । तस्बिरहरु :
विश्वमाझ नेपाललाई चिनाउन यसरी गर्नुहोस् श्रृंखलााई भोट, भोट गर्न २ दिन थपियो (सक्दो शेयर गर्न शृंखलाको अनुरोध)
Soldiers from the First Battalion The Royal Gurkha Rifles, currently deployed in Afghanistan, would like to wish Miss Nepal (@tht_missnepal_official ), Shrinkhala Khatiwada (@shrinkhala_ )all the best in the upcoming @missworld Pageant. #noonequitelikeus #ayogurkhali #rgr #missnepal #nepal #afghanistan
A post shared by The Royal Gurkha Rifles (@officialtheroyalgurkharifles) on Nov 27, 2018 at 2:00am PST
नोट : मिस वर्ल्डमा भोट गर्ने समय दुइ दिन थपिएको छ । अर्थात नोभेम्बर ३० तारिख सम्म भोट गर्न सकिनेछ ।
( यो माथी दिएको Link direct खोल्नोस र contestant number 78 वा shrinkhala type गरि खोज्नुस र like गर्नोस vote हुन्छ!)
यदि left side मा slide गरे no vote हुन्छ त्यसैले left मा नगर्ने)